Eo amin'ny tranokala fampiasa an-tserasera - Stigma farany amin'ny fandrarana ny marijuana
Eo amin'ny tranokala Fampiasana cannabis na fampiasana Social cannabis efa ela no nifandray tamin'ny zavatra ratsy, avy amin'ny fofony ary ny fiantraikany ratsy eo amin'ny vatan'olombelona. Na dia eo aza ny cannabis lasa lalàna ara-pitsaboana na fialamboly any amin'ny fanjakana maro, ny besinimaro na ny fampiasana sosialy dia mbola tsy manara-dalàna. Io dia vokatry mivantana ny stigma izay nomena tamina federaly nanomboka ny taona 1937, ary ny fikarohana zero dia miditra amin'ny tombontsoa azo avy amin'ny cannabis ary ankatoavina fotsiny amin'ny fitadiavana fiantraikany ratsy sy ny fahavoazana amin'ny fampiasana cannabis. Noho io antony io indrindra, ny Isiraely sy tsy i Etazonia dia mijanona ho ivon'ny siansa cannabis.
Inona ny toerana ny fampiasana ampahibemaso antsoina hoe "cannabis"?
Kafe rongony (cannabis)
Klioban'ny sakafo matavy
Fivarotana kafe cannabis (Amsterdam)
Bars cannabis / Pubs
Fampiasana rongony eto an-toerana
Vakio Thomas 'Article momba ny fampiasana ara-tsosialy ny rongony ao amin'ny Repoblikan'i Cannabis Law & Regulation - Eto.
Ny mpandraharaha cannabis dia tokony hijerena ny Prov General General hita ao amin'ny Andininy faha-55 ao amin'ny lalàna vaovao momba ny fanatanjahan-tena sy ny hetra any Illinois (ny «lalàna»), 410 ILCS 705 / 55-25. Andao apetrakao amin'ny pejy ho anao izany:
Fepetra fanaraha-maso ny fitsipika mifototra amin'ny otrikaina
Ny zana-bola dia mamela ny "orinasa orinasa rongony" tsy hampiasa eo an-toerana ihany, fa ny orinasa hafa koa nomen'ny governemanta eo an-toerana fahefana. Ny lalàna dia mamaritra ny "orinasam-pandraharahana rongony" ao amin'ny lahatsoratra famaritana azy ho toy ny orinasa rongony manana fahazoan-dàlana rehetra. Vao mainka lasa lavitra aza io lalàna io ary manome zo fanampiny ho an'ny governemanta eo an-toerana hanitatra ny fampiasana rongony eo an-toerana mihoatra ny toeram-piasan'ny rongony, toy ny dispensary, amin'ny antokon'olona manana fahefana toy izany.
Nahazo hery betsaka ny governemanta eo an-toerana rehefa misy ny lalàna momba ny cannabis, na eo aza ireo fanjakana nametraka ny rafi-panjakana. Ny ankamaroan'ny fanjakana dia mamela ny tompon'andraikitra hametraka ny isan'ny lisansa cannabis amin'ny faritra itondrany. Raha manana valim-pitondrana fehezin'ny fanjakana amin'ny fahazoan-dàlana cannabis i Illinois, ny kaominina dia mety hametraka "ôrdônansin'ny zone" mety hanara-maso ny orinasam-barotra cannabis.
Ny governemanta eo an-toerana dia mahavita mandrara ny fandraharahana fivarotan-tena mampirongatra sy manao lalàna mifanaraka amin'ny isany, ny halaviran'ny toerana heverina ho saro-pady nataon'ny munisipaly, ary ny fotoana hafa, ny toerana sy ny fomba amam-pitsipika.
Ny fahaiza-mandanjalanja dia famakafakana lalindalina tokoa izay mifototra amin'ny toe-javatra, fa manome ny fomba vaovao sy famoronana ihany koa ny governemanta eo an-toerana amin'ny fampiroboroboana ireo orinasa mifandraika amin'ny otrikaretina ary mamokatra vola.
Ny mahazatra analog amin'ny habaka fampiasana ara-tsosialy rongony dia bara izay misotro toaka. Matetika, ny kaominina dia tsy manana lalàna iray monja amin'ny alikaola.
Ny fijerena ireo ôrdônansin'ny tanàna niaviako dia niteraka fahazoan-dàlana alikaola amin'ny Class A hatramin'ny L, ary kilasy fito hafa. Ny tsiranoka dia manolotra fanovana maro samihafa amin'ny fahazoan-dàlana fampiasa amin'ny besinimaro, ary angamba maro hafa.
Ny tanàna dia afaka mamela ny efitranon'ny rongony, izay ahafahan'ny olona mihinana vokatra rongony mifoka rivotra fotsiny, noho ny mombamomba azy ireo, miaraka amin'ny faharetan'ny vokatry ny fifohana rongony, fa ny fihinanana bar Na ny tanàna dia mety hanana fepetra henjana kokoa, fehezina ara-dalàna, mifandraika amin'ny fanjifana ampahibemaso ny vokatra rongony azo hanina ho an'ny mpiambina fanampiny azo antoka amin'ny doka. Ny fandrika sasany dia mety hitranga amin'ny olona izay tsy zatra ny fanombohana sy ny faharetan'ny fihinana izay mifanohitra amin'ny rongony mifoka. Ny fanabeazana ny mpanjifa sy ny sarambabem-bahoaka dia mijanona ho zava-dehibe amin'ny firosoana mankany amin'ny fanarahan-dalàna sy ny lalàna mifehy.
Ho fanampin'izany, ny lalàna dia tsy manome mazava ho an'ireo klioba fisakafoanana rongony izay anamboaran'ny chef ny lovia vaovao rongony rongony vaovao ho an'ny vahiny. Angamba ny lalàna mifehy ny fanjifana eo an-toerana napetraky ny kaominina dia manome fomba hanatanterahana ireo tanjona ireo. Marina fa ny dispensary iray irery dia tsy afaka mamorona lovia atsofoka. Fanampin'izany, ny lalàna momba ny lalàna dia tsy voatery mandritra ny volana maromaro. Ny fotoana dia hilaza ny fampiasana ara-tsosialy rongony any Illinois miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny governemanta monisipaly hatao amin'ny rongony ao amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo.
Satria ny ôrdônansy misotro zava-pisotro misy alikaola sy ny sokajiny marobe ho toy ny votoatiny fitadiavana izay azo atao amin'ny fampiasana rongony ara-tsosialy, sy ny fampiasana betsaka ny teny hoe "entity nahazo alàlana" araka ny lalàna ho an'ireo izay mety mihinana eo an-toerana, ny lanitra no fetra. Voarara ny fanjifana ampahibemaso, fa angamba ny hetsika manokana, toy ny festival mozika, dia mety hahafeno fepetra hahazoana karazana fahazoan-dàlana rongony manokana. Angamba ny mpitsabo mpanotra eo an-toerana dia mety manomboka mampiasa loha-hevitra rongony amin'ny marary. Ny kilasy yoga dia mety hanana hetsika miaraka amina pairing iraisana mety ho an'ny asanas anao. Ny mpivarotra mofo izay miavaka amin'ny mofomamy eny amin'ny habakabaka ary mitazona ny mpampiditra rongony sy ny fahazoan-dàlana hividianana fanafody dia mety hisy indray andro any.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny serivisy sy ny varotra fampiasana rongony ampahibemaso
Ny fahazoan-dàlana hampiasaina ara-tsosialy monisipaly koa dia midika fidiram-bola bebe kokoa ho an'ny fiarahamonina. Matetika ny mpivarotra dia mandoa ny hetra amin'ny labiera sy zava-pisotro amidiny. Ny lalàna dia nanome fidiram-bola ho an'ny fanjakana sy ny tanàna amin'ny fivarotana rongony ao amin'ny dispensaries. Angamba ny governemanta dia afaka mampandoa hetra amin'ny fivarotana sakafo an-tsokosoko ao amin'ny trano fisakafoanana eo an-toerana, amin'ny fiheverana ny lalàna sy ny lalàna ho avy ao aminy mba hamela izany karazan-tsakafo izany. Ahoana ny momba ny mpitsabo mpanotra izay te hampiasa rongony hanorana ny hozatra marary? Tsy maintsy serivisy izy io satria ny dispensaries ihany no afaka mivarotra rongony efa voaangona mialoha. Na izany aza, ny kaominina dia afaka mitaky vola aloa amin'ny fampiasana toy izany ary angamba mifehy ny habetsaky ny THC amin'ny mpanala fanaintainana. Amin'ny ho avy, ny efitrano fatana fanjifana eo an-toerana dia hitondra ho an'ny kaominina fanampiny mamela hetra amin'ny haba sy ny varotra.
Angamba indray andro any ny hetra no ho lafo indrindra amin'ny rongony, toy ny labiera mialoha izany. Izany dia hitondra fanovana lehibe amin'ny lalàna rongony, fa tsarovy fa na tamin'ny taona 2019 aza dia nandany fanitsiana an-jatony ny lalàna mifehy ny zava-pisotro misy alikaola ny Etazonia. Ny fanovana amin'ny ambaratongan'ny mpanao lalàna dia mitaky fotoana, fa tsy mijanona ihany koa.
Ireo mpisolovava amin'ny rongony dia tompona orinasa ihany koa. Izy ireo dia afaka manampy anao amin'ny famolavolana ny orinasanao na manampy amin'ny fiarovana azy amin'ny lalàna mavesatra loatra.
[Contact-teny-7 404 "tsy hita"]
Antsoy izahay (309) 740-4033 || mailaka Us [email voaaro]